Tirada Dhimashada dab ka qarxay Garoowe oo gaartay saddex qof - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandTirada Dhimashada dab ka qarxay Garoowe oo gaartay saddex qof
Garoowe-(Puntland Mirror) Tirada Dhimashada dab ka qarxay Garoowe ayaa gaartay saddex qof, sida ay sheegeen ilo-wareedyo caafimaad.
Saraakiisha caafimaadka ee ku suagan isbitaalka guud ee Garoowe ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in saddex qof ay ku geeriyoodeen dabka. Qofkii ugu dambeeyay oo ahaa nin ayaa subaxnimadii hore maanta oo Arbaco ah ku dhintay isbitaalka.
Ilaa shan qof oo kale oo ku dhaawacmay dabka ayaa lagu daaweynayaa isbitaalka.
Dabka ayaa burburshay kaalimo shidaal iyo meherado kuyaala xaafada Horseed ee magaalada Garoowe.
Waxa uu ahaa dabkii ugu dhimashada badnaa taariikhda Garoowe. Lama oga weli sababta keentay dabka.
February 20, 2018 Ciidamadda booliiska gobolka Nugaal oo labo nin oo looga shaki qabo Al-Shabaab ku xiray Garoowe